Fifandraisan-davitra : niakatra 3.000 Ar ny vidin’ny karatra Sim | NewsMada
Fifandraisan-davitra : niakatra 3.000 Ar ny vidin’ny karatra Sim
Niray feo ! Mba hitandroana ny fandriampahalemana, niray feo ny mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra efatra (Telma, Airtel, Orange, Blueline), fa hampiharina ny lalàna, araka ny didy navoakan’ny minisitera maromaro. Manara-maso ny fanatanterahana azy ny Manampahefana mandrindra ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (Artec), mampatsiahy fa tokony ho fantatra ny mombamomba ny mpampiasa finday tsirairay. Tsy maintsy ampahafantarina eny amin’ny mpandraharaha isanisany avy, noho izany, ny mpanjifa, ka mitondra kara-panondro na pasipaoro na fahazoan-dalana mitondra fiara.
Manome fahazoan-dalana manokana
Hanatanterahana izany, nanapa-kevitra ireo mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra ireo fa voatery hampiakarina ho 3.000 Ar ny vidin’ny karatra Sim iray ho an’ny mpanjifa vaovao, manomboka ny 1 avrily 2016, raha toa ka 500 Ar sy 1.500 Ar hatramin’izay. Antony, mitombo ny masonkarena lany satria hisy ny fampahalalana ny besinimaro amin’ny endriny samihafa, mitombo ny kojakoja ampiasaina amin’ny fikarakarana ny fandraisana ny mombamomba ny mpanjifa tsirairay, sns.
Misy fepetra manokana ho an’ireo mpanjifa tsy afaka manatona mivantana eny amin’ny foibe na masoivohon’ny mpandraharaha. Manome taratasy fahazoan-dalana (procuration) ny solontenany. Maka fahazoan-dalana avy amin’ny ray aman-dreniny kosa ny ankizy tsy ampy taona na olona iantohany.
Hatramin’ny 1 avrily 2016 ny fe-potoana farany, ahafahana manamafy ny maha mpanjifa azy. Handray fepetra ny mpandraharaha rehefa dila io fotoana io.